Windows 10 ine njodzi isina kugadziriswa yavari kurwisa | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi mavhiki maviri apfuura tinoburitsa chinyorwa kudzokorora "kudzidza", kuiisa mumakotesheni, ayo akataura izvozvo Windows 10 yakanga yakachengeteka kupfuura Linux. Ngatiregei kupinda mumakakatanwa pamusoro pechinonzi Linux, nekuti midhiya ese anoziva kuti ikirinari, pachokwadi yakataurwa mu "kudzidza", asi isu tinowanzo taura kwayowo sisitimu inoshanda. Zvese izvo hazvina basa, uye zvakanyanya kudaro apo Microsoft nezuro yakaburitsa pachena hurema huviri hunokanganisa shanduro dzazvino dzesisitimu yayo yekushandisa.
Chekutanga pane zvese, iyo kambani inotya Satya Nadella Izvo zvave zvichizivikanwa ndiani anoziva izvozvo pane kurwiswa kumakomputa achishandisa Windows, achitora mukana wekusagadzikana kusagadziriswa muAdobe Type Manager Raibhurari: «Kune mairi maviri ekure kodhi kuuraya kusagadzikana muMicrosoft Windows kana iyo Windows Adobe Type Manager raibhurari isingabate zvisirizvo yakanyatsogadzirwa multitenzi font: Adobe Type 1 PostScript fomati.".
Windows 10 yakachengeteka kupfuura Linux, vakati ...
Uye pano isu tinofanirwa kutaura zvekare zvakare nezve "kusachengeteka" kweLinux uye "kuchengetedzeka" kweWindows: ivo "nyanzvi" vakaita chidzidzo chatakaburitsa mavhiki maviri apfuura vakataura nezve huwandu hwekushupika, kwete kuomarara kwavo kana nguva yehupenyu Tisingataure kuti ivo vakango kukoshesa iyo yekupedzisira makore gumi eWindows uye makore makumi maviri apfuura eLinux. Uye ndeyekuti nharaunda yeLinux inogadzirisa matambudziko ayo mumazuva, dzimwe nguva mumaawa, nepo Microsoft ichititaurira kuti iri kutoshanda kugadzirisa imwe kukanganisa kuri kutoputika uye tinofanirwa kudzikama nekuti "Windows 10 yakachengeteka."
Kana zviri zvekusagadzikana, iri "zero-zuva", zvinoreva kuti ichangobva kuwanikwa uye haina chigamba chiripo, uye inokanganisa Windows 7 zvichienda mberi, izvo zvinosanganisira maSeva shanduro. Kana mushandisi akavhura faira yakanyatsogadzirwa, kodhi iri kure inogona kuurayiwa. Windows 10 vashandisi vanogashira chigamba pane rimwe Chipiri, tarisiro nhasi, asi avo e Windows 7 inogona kusatomboigamuchira.
Vashandisi veWindows vanoda ita shuwa kuti hauna kurwiswa uku ivo vanofanirwa kudzima iyo yekutarisa yekutarisa uye ruzivo pane, ita zvimwe chete kune WebClient sevhisi, uye tumidzazve iyo faira atmfd.dll. Ivo vanofanirwa kudzikama nenzira iyoyo ... kana kwete ... asi Windows 10 yakachengeteka kupfuura Linux (ona irony).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Kutaura nezvekuchengeteka ...: Windows 10 ine njodzi yavari kutorwisa uye yavasina mhinduro
Mubvunzo: Windows yakachengeteka kupfuura GNU / Linux?
Mhinduro: ZVINONYANYA KUNAKA.
Tsananguro: Zvakachengeteka zvakanyanya kwauri kuti ubate kodhi yakaipa (mavhairasi, minye, Trojans, nezvimwewo). Zvakachengeteka zvakanyanya kuwana kurwisa kweDDOS. Zvakachengeteka zvakanyanya kuve nebhuruu skrini. Izvo zvakachengeteka zvakanyanya kune iyo system kupunzika (uye hauzomboziva nei). Zvakachengeteka zvakanyanya kuti iyo yekuvandudza inomanikidza iwe kudzoreredza sisitimu. Zvakachengeteka zvakanyanya zvekuti hauzomboziva nezve Trojan yawaive nayo nekuti Microsoft haikunyevere nezve "kumashure masuo." Izvo zvakachengeteka zvakanyanya kuti unofanirwa kudzikisira yako yakaoma dhiraivhu hushoma kanokwana kana pagore kana iwe usiri kuda kuve nekamba paPC imwe neimwe. Uye zvichingodaro kusvika kusingaperi ...
Izvo zvakare zvakaratidza kuti hapana yakachengeteka system: Linux, macOS uye Windows kuwira paPwn2Own 2020